China Eyeshadow boaty fefy milina famolavolana sy mpamatsy | Sunkia
Ny fonosana fonosana 211 dia mifanaraka amin'ny tinady amin'ny tsena dia ny fampivoarana fitaovana vaovao, ny varingarina avo lenta, wo Chuan PLC Taiwan fanaraha-maso maso ny efijery wemview, ny fanitsiana ny parameter. Ny divay matevina matevina, boaty firavaka, boaty fikandrana, afaka mamonosina ivelany koa izy, fonosana kitapo iray, fonosana amin'ny rivotra, miketrona, manodikodina, ary baoritra volamena sy volafotsy, tsy dia tsara ny effets adhesive taratasy manokana, ny gorodona vita amin'ny taratasy matevina ary ny hafa olana milina leveling.
1. ny hafainganam-pandeha mamorona sy mifamatotra dia haingana ary milamina ny kalitao.
2. vokatra mamolavola tsy misy fanamainana rivotra, entana toy ny fihodinana, manangona habaka malalaka.
3. tsotra ny fitsipika, milamina ny milina, ary mety ny fandidiana. Tsy mila fampiofanana tsotra fotsiny ireo mpiasa vao mahazo ilay asa.
4. Faritany, avo lenta ny fahombiazana izay imbetsaka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fatorana amin'ny tanana ankapobeny.
5. ny fitaratra miendrika fonosana fitaratra 211 dia azo ampiarahana amin'ny tsipika famokarana haingana be, ary azo novokarina tamin'ny milina tokana.lt dia mora ny mihetsika ary apetraka amin'ny fomba rehetra.
Haben'ny ambany indrindra
Ao anaty sy ivelan'ny hatevin'ny vala
Previous: Masinina sisiny efatra
Manaraka: Masinina mandeha ho azy
Semi-mandeha ho azy boaty hentitra marika milina amin'ny r ...